2-Qof dhimasho 5-Kale dhaawac Culus Qarax Ciidamada Puntland uu kasoo Gaaray Qarax Miino oo lala beegsaday |
2-Qof dhimasho 5-Kale dhaawac Culus Qarax Ciidamada Puntland uu kasoo Gaaray Qarax Miino oo lala beegsaday
Boosaaso (NN) 26/05/2016
Laba Askari oo ka Tirsan Ciidamada Puntland, ayaa ku geeriyooday, shan kalena way ku dhaawacmeen qarax miino lagula eegtay gaari dagaal oo ay ciidamadan wateen duleedka Magaalada Boosaaso ee xarunta Puntland.
Wararka ayaa sheegaya in Gaariga Dagaal ay la socdeen ciidanka Puntland uu ku sii jeeday Buuraha-Galgala, halkaas oo ay fariisimmo ku leeyihiin ciidamada daraawiishta Maamulka Puntland.
Sidoo kale, Askarta ku Dhaawacmay Qaraxaan ayaa la geeyay Isbitaalka Boosaaso, iyadoo qaar ka mid ah dhaawacyada Askarta la sheegay inay yihiin kuwo culus oo lala Tacaalayo.
Mas’uuliyadda Weerarkaan, ayaa waxaa sheegatay Al-shabaab, iyadoo Warbixinno ay soo dhigtay barahooda ku xusay inay qaraxan ku burburiyeen gaadiid dagaal oo ay la socdeen ciidammo ka tirsan kuwa Puntland, ayna ku dileen shan askari.
Ugu dambeyn, Buuraha Galgala ayaa waxaa muddo sanado ah ku Dagaallamayay Ciidanka Puntland iyo Xoogag taabacsan Al-shabaab, inkastoo Puntland ay horay u sheegtay in ay la wareegtay Buurahaas, hadana weli ay ku jiraan dagaalyahanada kasoo horjeeda Puntland.